ရဲအရာရှိ (ဘေးထွက် / အကယ်ဒမီဘွဲ့လွန် ... | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ LIVE ။ Broadcast Engineering News
ပင်မစာမျက်နှာ » ဂျော့ဘ် » ရဲတပ်ဖွဲ့အရာရှိ (Lateral / အကယ်ဒမီဘွဲ့လွန် ...
ယောဘသည်ဖွင့်ပွဲ: ရဲတပ်ဖွဲ့အရာရှိ (Lateral / အကယ်ဒမီဘွဲ့လွန် ...
ရာထူး: ရဲတပ်ဖွဲ့အရာရှိ (Lateral / အကယ်ဒမီဘွဲ့လွန် ...
ကုမ္ပဏီ: , La Palma,, CA ၏စီးတီး
ဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်ရာဇဝတ်မှုကာကွယ်တားဆီးရေးအလုပျလုပ်ဆောင်; ယာဉ်အသွားအလာစီးဆင်းမှုကိုထိန်းချုပ်ထားနှင့်ပြည်နယ်နှင့်ဒေသခံအသွားအလာစည်းမျဉ်းများပြဋ္ဌာန်း; စုံစမ်းအလုပ်လုပ်ဆောင်; ပါဝင်နှင့်အထူးဌာနရာဇဝတ်မှု-ကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့်အဘက်တော်သားအစီအစဉ်များမှထောက်ခံမှုနှင့်အကူအညီများကိုထောက်ပံ့ပေး; လိုအပ်သောအဖြစ် related တာဝန်များကိုလုပ်ဆောင်တယ်။
ဤသည်ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုငြိမ်းချမ်းရေးအရာရှိ status ကိုလိုအပ်သည့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့စီးရီးအတွက် entry ကိုအဆင့်ကိုခွဲခြားသည်။ ရဲအရာရှိချုပ်လူတန်းစားမှခွဲဝေရာထူးရဲဦးစီးဌာနအတွင်းအလုပ်လုပ်တဲ့ဒေသများ၏တစ်အရေအတွက်တာဝန်ပေးအပ်ကြသည်; ပေးအပ်သောတာဝန်များကိုအချို့ကိုရဲချုပ်ကဆုံးဖြတ်သကဲ့သို့,, La Palma ရဲဌာနနှင့်အတူကြိုတင်အတွေ့အကြုံကိုလိုအပ်သည်။
APPLICATION သို့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ: , La Palma ပလီကေးရှင်းစီးတီးလိုအပ်သည်မှာအွန်လိုင်းရရှိသောနိုင်ပါသည် www.cityoflapalma.org။ အဆိုပါလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ရုံးထည့်သွင်းစဉ်းစားဘို့အရည်အချင်းပြည့်မီဖြစ်ဖို့စာရင်းသွင်းနောက်ဆုံးပုံစံတင်ပို့ရန်နေ့စွဲနှင့်အချိန်အားဖြင့်ပြီးစီး applications များ, ပြန်လည်စတင်များနှင့်ဖြည့်စွက်မေးခွန်း (လိုအပ်လျှင်) ကိုလက်ခံရရှိရပါမည်။ ဖက်စ်လက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်မရ, မကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းမှအလိုတော်ကိုးကားတစ်ပြီးစီးခဲ့စီးတီးလျှောက်လွှာများအစားကိုလက်ခံလိမ့်မည်။ လျှောက်လွှာပုံစံပေါ်တွင်ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းမှကိုးကားလျှောက်လွှာ disqualify လိမ့်မည်။ ဤသည်မှာအနာဂတ်အချိန်ပြည့်နေရာလွတ်အတွက်အသုံးပြုခံရဖို့တစ်ဦးအရည်အချင်းပြည့်မီစာရင်း၏တည်ထောင်ခြင်းများအတွက်ပွင့်လင်းစုဆောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအနေအထားနောက်ထပ်အသိပေးစာအထိဖွင့်သည်နှင့်မည်သည့်အချိန်တွင်မနှင့်ကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲပိတ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။
ရွေးချယ်ရေးလုပ်ငန်း: အားလုံး applications များပြသမည်ဖြစ်ပြီးအရှိဆုံးသက်ဆိုင်ရာအရည်အချင်းများကိုတင်ပြခြင်းနှင့်ရာထူးများအတွက်လိုအပ်သောလိုင်စင်နှင့်လက်မှတ်များအားအပိုင်သောသူတို့အားကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေးချယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ဆက်လက်ရန်ဖိတ်ခေါ်လိမ့်မည်။ အဆိုပါရွေးချယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစမ်းသပ်ခြင်းများနှင့်ပါးစပ်အင်တာဗျူးတွေပါဝင်နိုင်သည်။
ရာဇဝတ်သားစံချိန်စစ်ဆေးမှုများအပါအဝင်တစ်ဦးကနောက်ခံသမိုင်းကြောင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး, ကြိုတင်အလုပ်အကိုင်မဆိုကမ်းလှမ်းမှုရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ အားလုံးချိန်း (ကမူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်မျက်နှာပြင်အပါအဝင်) post-ကမ်းလှမ်းမှုကိုဆေးပညာဆိုင်ရာစာမေးပွဲများ၏အောင်မြင်သောပြီးစီးဖို့ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။
မသန်စွမ်းတစ်ဦးအရည်အချင်းပြည့်မီတစ်ဦးချင်းစီအတွက်စာမေးပွဲဖြစ်စဉ်တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်နေရာထိုင်ခင်းမလိုအပ်သင့်ပါတယ်, La Palma ၏စီးတီးမတိုင်မီအချိန်ကာလသတ်မှတ်စာမေးပွဲယနေ့အထိနောက်မငါးအလုပ်လုပ်ရက်ပေါင်းထက်အကြောင်းကြားရပါမည်။
, La Palma ၏စီးတီးလူမျိုး, ဘာသာရေး, အသားအရောင်, လိင်, အသက်, မျိုးရိုး, မူရင်းနိုင်ငံသား, အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေ, သို့မဟုတ်မသန်စွမ်းများ၏အခြေခံပေါ်မှာခွဲခြားမှုမထားဘူး။ တန်းတူအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းစုဆောင်းမှု, ရွေးချယ်မှု, သင်တန်း, လွှဲပြောင်း, ပရိုမိုးရှင်းများ, အကဲဖြတ်, လျော်ကြေး, စည်းကမ်း, layoffs ကို Terminal နှင့် rehires, ကန့်သတ်ထားအပါအဝင်ပေမယ့်အားလုံးမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်များလုပ်ရပ်များမှလျှောက်ထားပါလိမ့်မယ်။
မှတ်စု: , La Palma ၏စီးတီးအားလုံးသည်န်ထမ်း "။ သဘာဝဘေးဝန်ဆောင်မှုအလုပ်သမားများ" ဖွပြည်နယ်ဥပဒေနှင့်စီးတီးထုံးစံနှစ်ဦးစလုံးအားဖြင့်သတ်မှတ်ထားတဲ့ကြေငြာအရေးပေါ်သို့မဟုတ်မည်သည့် undeclared အရေးပေါ်ဒါမှမဟုတ်ဘဝခြိမ်းခြောက်ကြောင်းသဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ၏ဖြစ်ရပ်မှာတော့, ကျန်းမာရေး, နှင့် / သို့မဟုတ်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိပါသည် အများပြည်သူ၏, န်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သားများကကူညီပေးဖို့တာဝန်ပေးနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့သောတာဝန်တွေနာရီအတွင်း, နေရာဖြစ်နှင့်အလုပ်ဖျော်ဖြေပုန်ထမ်း '' သာမန်အလုပ်တာဝန်တွေကနေသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်အရေးပေါ်များ၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအဆင့်တဆင့်ကိုဆက်လက်ဖြစ်နိုင်သည်လိမ့်မည်။
ဒီစာစောင်၏ပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုအမြန်သို့မဟုတ်အဓိပ်ပာစာချုပ်တစ်ရပ်ကိုဖွဲ့စည်းကြပါဘူး။ ဒီစာစောင်တွင်ပါရှိသောမည်သည့်ပြဋ္ဌာန်းချက်အသိပေးစာမပါဘဲပြုပြင်ထားသောသို့မဟုတ်ရုတ်သိမ်းနိုင်ပါသည်။ အကျိုးကျေးဇူးကုန်ကျစရိတ်ဆီသို့စီးတီးပံ့ပိုးမှုများကိုအပါအဝင်ပေးဝန်ထမ်းအကြိုးခံစားခှငျ့, အမျိုးအစားများနှင့်အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲမှဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။
တာဝန်ကျတဲ့နေရာပေါ် မူတည်. မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလုပ်ငန်းတာဝန်များပါဝင်သည်, ဒါပေမယ့်ကန့်သတ်ကြသည်မဟုတ်, အောက်ပါ:
ရေဒီယိုတပ်ဆင်ထားကားတစ်စီးထဲတွင်ခြေလျင်, စက်ဘီးသို့မဟုတ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်ပေါ်ကင်းလှည့်စီးတီး; အဖြေကိုအသက်နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်စီးတီး, ကောင်တီ, နှင့်ပြည်နယ်ဥပဒေများကို၏ဘက်တော်သားတောင်းဆို; ပဏာမကျင်းပနှင့်နှောင့်အယှက်, prowlers, ဖောက်ထွင်း, ခိုးယူမှုသည်, လုယက်မှု, ယာဉ်မတော်တဆမှု, သေခြင်းနှင့်အခြားရာဇဝတ်ဖြစ်ရပ်များစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေတက်လိုက်နာပါ။ ဖမ်းဆီးမှုများအဖြစ်လိုအပ်သောစေသည်; အင်တာဗျူးခံရသူတိုင်ကြားမှုများနှင့်မျက်မြင်သက်သေများ; သံသယရှိသူ interrogates; စုရုံးခြင်းနှင့်သက်သေအထောက်အထားထိန်းသိမ်း; testifies နှင့်တရားရုံးတွင်သက်သေအထောက်အထားများတင်ပြသွားပါသည်။
အဆက်အသွယ်များနှင့်ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကို စိုးရိမ်. နှင့်ပြစ်မှုများ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့်စပ်လျဉ်းကိစ္စရပ်များတွင်အခြားဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသည်။ လှုပ်ရှားမှုများဖျော်ဖြေနှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောအဖြစ်အပျက်များလေ့လာတွေ့ရှိထားဖမ်းဆီးမှုများ၏အစီရင်ခံစာများပြင်ဆင်ကြရသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအဆောက်အဦ check လုပ်ပေးပါတယ်။ ရှာဖွေမှု, လက်ဗွေရာများနှင့်အကျဉ်းသားများသယ်ယူပို့ဆောင်။ လိုအပ်သောအဖြစ် CPR နဲ့ပထမဦးဆုံးအကူအညီစီမံခန့်ခွဲ။
တည်စေခြင်း, အများပြည်သူ, ကန်ထရိုက်တာ, စျေးသည်, နိုင်ငံသားအုပ်စုများနှင့်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံအရာရှိများ, ပူးတွဲလုပ်သားများနှင့်အတူအပြုသဘောနှင့်သဟဇာတအလုပ်လုပ်ဆက်ဆံရေးလှုံ့နှင့်ထိန်းသိမ်းထားသည်။
ယာဉ်အသွားအလာဘေးကင်းလုံခြုံရေးအခြေအနေများထိန်းချုပ်ရန်နှင့်ယာဉ်အသွားအလာဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာဥပဒေများပြဋ္ဌာန်းရန်မှသတ်မှတ်ထားသောကြိမ်အတွင်းကင်းလှည့်လမ်းများ။ မှတ်ချက်ချမော်နီတာနှင့်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များနှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောအသွားအလာအခြေအနေများထိန်းချုပ်; ယာဉ်အသွားအလာဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုထိခိုက်ရသောအခြေအနေများနှင့်ဖြစ်ရပ်များကဤသို့နှင့်ဖြစ်စေမှန်ကန်သောလုပ်ရပ်များသို့မဟုတ်အစီရင်ခံစာများတိုးတက်မှုများအတွက်ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများနှင့်အကြံပြုချက်များကြာပါသည်။ ယာဉ်အသွားအလာဖြစ်စဉ်များနှင့်အရေးပေါ်အခြေအနေနှင့်ဆက်စပ်သောဖုန်းခေါ်ရန်တုံ့ပြန်; တုံ့ပြန်မှုနှင့်အသွားအလာမတော်တဆမှုစုံစမ်းစစ်ဆေး။ ကိုကူညီပေးနေနှင့်ယာဉ်အသွားအလာနှင့်လူသွားလူဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်ယာဉ်မောင်းတွေဆီကအကြံပေး။
အကျဉ်းသား process လုပ်တယ်; ရမ်းခြင်းနှင့်ဆင့်ခေါ်စာတာဝန်ထမ်းဆောင်; ဖိုင်တွေနဲ့အမှားတွေနဲ့ပြစ်မှုတိုင်ကြားမှုများ process လုပ်တယ်။
သြဒီနိတ်နှင့် Juvenile နှင့်လူကြီးများ, လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုဆန့်ကျင်ပြစ်မှုနှင့်ဒု, ဂိမ်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးချိုးဖောက်မှုများနှငျ့ပတျသကျသောပြစ်မှုများနှငျ့ပတျသကျသောပြစ်မှုများ၏ပြည့်စုံခြင်းနှင့်အသေးစိတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်။ ဒေသခံနှင့်ပြည်နယ်ဥပဒေများကိုပြဋ္ဌာန်းအညွှန်းစာထုတ်ပေး, ဖမ်းဆီးခြင်းအောင်, ပထမဦးဆုံးအကူအညီစီမံခန့်ခွဲခြင်း, အကျဉ်းသားပို့ဆောင်အပါအဝင်အားလုံးဥပဒေစိုးမိုးရေးလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်သူ။ လျှို့ဝှက်ထောက်လှမ်းရေးတာဝန်နှင့်စောင့်ကြည့်လှုပ်ရှားမှုများလုပ်ဆောင်တယ်။
စုံစမ်းအစီရင်ခံစာများနှင့်အမှုသတင်းအချက်အလက်များပြင်ဆင်; တရားရုံးတွင်သက်သေအထောက်အထားများနှင့်သက်သေခံချက်များကို; ဒေသခံနှင့်ပြည်နယ်ဥပဒေများ, လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်ရဲဌာနလှုပ်ရှားမှုများကိုရည်မှတ်အများပြည်သူထံမှအဖြေကိုမေးခွန်းများကို။
အင်တာဗျူးခံရသူတိုင်ကြားမှုများ, မျက်မြင်သက်သေများနှင့်သံသယရှိသူ; Collections, ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်တွေ့ရှိရပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကိုထိန်းသိမ်းထား, ဘေးကင်းလုံခြုံစောင့်ရှောက်မှုအတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်မသင်္ကာပြစ်မှုများနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထား; ရမ်းခြင်းနှင့်ဆင့်ခေါ်စာပေးပါသည်။
အစီအစဉ်များ, သြဒိနိတ်နှင့်အထွေထွေအများပြည်သူတို့အတွက်ဥပဒေပညာရေးနှင့်ရာဇဝတ်မှုကာကွယ်တားဆီးရေးအစီအစဉ်များအတွက်ပါဝင်; ကျောင်းများ, လူငယ်အဖွဲ့အစည်းများ; , လူထုခွာနှင့်ရပ်ရွာအုပ်စုများ။
လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များကျင်းပနှင့်သြဒိနိတ်, ဖွံ့ဖြိုး; သင်တန်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းကိရိယာများလိုအပ်ချက်များကိုတန်ဖိုး။ စုဆောင်းမှုနှင့်ရွေးချယ်ရေးအတွက်ကူညီပေးနေ။
လက်ရှိသမ္မတအမျိုးမျိုးသောနှင့်အလှည့်အဆိုင်း, ည, တနင်္ဂနွေအလုပ်လုပ်ကိုင်ဖို့တာဝန်ခံရစေခြင်းငှါ, ညွှန်ကြားထားအဖြစ်အချိန်ပိုလုပ်ကိုင်ဖို့လိုအပ်သည်။ တာဝန်ပေးကဲ့သို့သောအခြားတာဝန်များကိုလုပ်ဆောင်တယ်။
အသိပညာ: ခေတ်သစ်ဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေခံမူ, လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ, နည်းစနစ်နှင့်ကိရိယာများ; တည်ဆဲဥပဒေများအထုံးများနှင့်စည်းမျဉ်းများ, POST စံချိန်စံညွှန်းများ။
စွမ်းရည်မှ: တိကျစွာစောင့်မျက်နှာများ, နံပါတ်များ, ဖြစ်စဉ်များနှင့်သောအရပ်တို့ကိုမအောက်မေ့ကြလော့ သုံးပါနဲ့သေနတ်အဘို့ဂရုစိုက်; တိကျစွာထင်နှင့်အရေးပေါ်အခြေအနေအတွက်လျင်မြန်စွာပြုမူများနှင့်တရားသူကြီးအခြေအနေများနှင့်လူများ; သင်ယူနားလည်နှင့်ဥပဒေများ, စည်းမျဉ်းများနှင့်မူဝါဒများအနက်ကိုဘော်ပြ; တိကျစွာကျစ်, legibly နှင့်မှန်ကန်သောအင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါအသုံးပြုမှုနှင့်စာလုံးပေါင်းနှင့်အတူ, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆက်သွယ်ပြောဆို; ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်သေအထောက်အထားများနှင့်သင်္ချာပုံသေနည်းသို့မဟုတ်ဂရပ်များကို အသုံးပြု. ခန့်မှန်းချက်မော်တော်ယာဉ်မြန်နှုန်း; ပုံကြမ်းမတော်တဆမှုနှင့်ရာဇဝတ်မှုမြင်ကွင်းများ; ရဲရဒေီယိုစနစ်၏စံအသံလွှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုသင်ယူ; တုတ်နည်းစနစ်, သော့ခလောက်, အိမ်မှာရှိနေတဲ့, ရရှိထားသူသို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောလက်ထိတ်ခတ်အဖြစ်တားမြစ်ကိရိယာအားဖွငျ့တစ်ဦးချင်းစီချုပ်တည်းနှင့် / သို့မဟုတ်တို့ကိုနှိမ့်; အလုပ်၏သင်တန်းအတွက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာသူတို့နှင့်အတူထိရောက်သောအလုပ်လုပ်ဆက်ဆံရေးထူထောင်ထိန်းသိမ်းနည်း; အမျိုးမျိုးသောလူမှုယဉ်ကျေးမှုနောက်ခံလူတွေကိုအမျိုးမျိုးနှင့်အတူထိရောက်စွာဆက်သွယ်ပြောဆို; လူများ, ရန်သူနှင့်ထောက်ခံသူများအမျိုးမျိုးနှငျ့ဆကျဆံရာတှငျလေ့ကျင့်ခန်းအလိမ္မာ, ကိုယ်ပိုင်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း, တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းနှင့်နည်းဗျူဟာ; ပါးစပ်နှင့်ကျမ်းစာ၌ရေးထားလမ်းညွန်နားလည်ထွက်သယ်ဆောင်; ဦးစီးဌာနတို့ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်း; ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု၏မြင့်မားသောအဆင့်သည်။
ယင်းအသိပညာ, ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့်အရည်အချင်းများလိုအပ်သည့်ထောက်ပံ့ပေးသည်ဟုပညာရေးနှင့် / သို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံမဆိုပေါင်းစပ်။ ဥပမာအားဖြင့်ပေါင်းစပ်ပါဝင်သည်:
အထက်တန်းကျောင်းသို့မဟုတ် Lateral ရဲတပ်ဖွဲ့အရာရှိအဘို့အရဲတပ်ဖွဲ့အလုပ်အတွက်ညီမျှသောတစ်နှစ်အတွေ့အကြုံကနေကျောင်းဆင်းပွဲ။ Entry-level အဘို့မလိုအပ်ကြိုတင်ရဲတပ်ဖွဲ့အတွေ့အကြုံကို။ lateral လျှောက်ထားခိုင်လုံသော POST လက်မှတ် posses ရမယ်ဒါမှမဟုတ်နောက်ဆုံးသုံးနှစ်အတွင်းအနေနဲ့အတည်ပြု POST အကယ်ဒမီပြီးစီးခဲ့ပါပြီရပါမည်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတောင်းဆိုချက်များ & လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်:
ဒီနေရာမှာဖော်ပြထားတဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတောင်းဆိုချက်များနှင့်အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအောင်မြင်စွာဒီအလုပ်ရဲ့မရှိမဖြစ်လုပ်ငန်းဆောင်တာလုပ်ဆောင်ဖို့ဝန်ထမ်းများကတွေ့ဆုံခဲ့ရမည်ဖြစ်သည်သောသူတို့၏ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ကြသည်။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်နေရာထိုင်ခင်းအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုလုပ်ဆောင်မှမသန်စွမ်းတစ်ဦးချင်းစီကို enable လုပ်နိုင်ပါသည်။
ဒီအနေအထားကို၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောလုပ်ငန်းတာဝန်များမကြာခဏရုတ်သိမ်းပေးရန်နှင့် 50 ပေါင်အထိသယ်ဆောင်ဖို့ကလက်ရှိသမ္မတလိုအပ်နှင့်ဆွဲ 160 ပေါင်အထိ objects; ကိုတက်သို့မဟုတ်ခြံစည်းရိုး, နံရံများနှင့်အခြားအတားအဆီးကျော်ခုန်; မြင့်မားသောမျက်နှာပြင်များတက်; အတားအဆီးမှတဆင့်ဝင်ပေါက်ရဖို့ရန်ကိုယ်ထင်ရှားအင်အားသုံးတတ်၏ ခြေလျင်သံသယရှိသူထွက်ပြေးလာသောကိုလိုက်ပြေး။ ရန်လိုသောသို့မဟုတ်အလားအလာရန်လိုသောလူတို့နှင့်အတူထိပ်တိုက်ဖျန်ဖြေ; အလားအလာအန္တရာယ်ရှိသောသို့မဟုတ်အရေးပေါ်ထိုကဲ့သို့သောတိုးတက်မှုပြစ်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု၌ရှိသကဲ့သို့အခြေအနေများ, သေနတ်သံ, သရမ်းလူအစုအဝေးနှင့်အသင်းတော်များ, စီးနင်းမှုများနှင့်အန္တရာယ်ရှိရာဇဝတ်ကောင်၏စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုများလဲလှယ်, သေစေနိုင်သောတိုက်ခိုက်မှုအောက်မှာအလုပ်; ပွင့်လင်းလမ်းများပေါ်တွင်သို့မဟုတ်သိပ်သည်းဒေသများရှိကားမောင်းမြန်နှုန်းမြင့်ရေးရာများတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံ; လက်အချက်ပြ, ဓာတ်မီး, illuminated တုတ်, မီး, အသွားအလာတစ်မျိုးကတော့သို့မဟုတ်အခြားအတားအဆီးတွေကို အသုံးပြု. တိုက်ရိုက်အသွားအလာ; အရေးပေါ်အခြေအနေများတွင်အေးဆေးနေကြဆဲဖြစ်သည်။ ဒီအနေအထားအားဖြင့်လိုအပ်သည့်တိကျသောရူပါရုံကိုစွမ်းရည်နီးကပ်သောရူပါရုံကို, အကွာအဝေးရူပါရုံကို, အရောင်ရူပါရုံကို, အရံရူပါရုံကို, အတိမ်အနက်ကိုအမြင်နှင့်အာရုံကိုထိန်းညှိဖို့စွမ်းရည်များပါဝင်သည်။
ဒီအနေအထားကို၏လုပ်ငန်းတာဝန်များအားမကြာခဏမြင့်မားသောဆိုးဝါးနေသောအရပ်တွင်သို့မဟုတ်ပေါက်ကွဲအတူစက်မှုအစိတ်အပိုင်းများကိုရွေ့လျားအနီးပြင်ပရှိရာသီဥတုအခြေအနေများအတွက်အလုပ်လုပ်နေရန်လိုအပ်သည်။ ဒီအနေအထားရံဖန်ရံခါအခြေအနေများ, အငွေ့သို့မဟုတ်လေထုအတွင်းအမှုန်, အဆိပ်အတောက်သို့မဟုတ် caustic ဓာတုပစ္စည်းအစွန်းရောက်အအေး, အစှနျးရောအပူ, တုန်ခါမှုနှင့်အသံကျယ်ဆူညံသံအဆင့်ဆင့်ပေါ်သို့နှင့် / သို့မဟုတ်စိုစွတ်သောထိတွေ့လိုအပ်သည်။
SoftAtHome, MStar, CES2017 ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2017-08-31
ယခင်: Decentrix Mediabase ဂါးဒီးယန်းစီးပွားရေး Optimization ရိုးရှင်းဖို့မှာ Data အတိုင်းအတာအသုံးပြု
နောက်တစ်ခု: အဆိုပါပြီးပြည့်စုံသော Shot ရှာဖွေနေပါသလား ဒါဟာပံ့ပိုးမှုနှင့်အတူစတင်။